Momba anay - Jinan Mingchang Manufacture Co., Ltd.
Jinan Mingchang Manufacture Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2008, manokana amin'ny famokarana ny Auto faritra, Machining faritra, forging sy fanariana faritra, Seal lohany, Lohataona, fitaovana elektrika sy ny vokatra vy hafa. Vokatra avo lenta, lamaody ary be mpampiasa amin'ny indostrialy famokarana isan-karazany.tsy vitan'ny tsena marobe amin'ny varotra eto an-toerana ihany, fa aondrana any Azia, Eropa ary Amerika koa.
Ny MC Manamboatra nandritra ny taona maro dia nifikitra hatrany tamin'ny "kalitaon'ny vokatra mba hahatafavoaka velona, ​​tanjona amin'ny serivisy fitokisana sy serivisy fampandrosoana". Manolo-tena hanome anao vokatra avo lenta sy serivisy kalitao. Manàna ekipa fitantanana endrika matihanina sy vita fanoloran-tena, avy amin'ny famolavolana vokatra, fanaovana bobongolo, fizotran'ny famokarana, ho an'ny lafiny tsirairay sy ny fizotrany dia sedraina mafy sy hifehezana izy ireo.
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay amin'ny famokarana sy fitantanana ary fikarohana, MC dia nanangana ny rafitra fitantanana kalitao manokana ary nandalo ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO9001: 2008. MC mba hampihatra hatrany ny foto-kevitra momba ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpanjifa namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa samy hafa, ary manome vahaolana hatrany ny mpanjifa sy olana ara-teknika. Fikarohana bebe kokoa sy fanavaozana ary hatsarana.
· Sina Miorina amin'ny teknolojia mpamokatra
· Kalitao avo lenta sy vidin'ny fifaninanana
· Faham-pamokarana lehibe
· Fanaterana haingana
· Traikefa amin'ny famokarana 13 taona
· Fivarotana tena tsara sy serivisy aorian'ny fivarotana
· Ny vokatray dia amidy eran'izao tontolo izao
· Fitaovana mandroso sy talenta tsara